Dambudziko rekugadzirisa. Iyo Open Source Inogona Sei Kubatsira | Linux Vakapindwa muropa
Dambudziko rekugadzirisa. Iyo Open Source Inogona Kubatsira Sei
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, Free Software
Kana iwe ukauya kuLinux Vapomeri uchiedza kutiza iyo Coronavirus media blitz, iwe wakapinda isiriyo posvo. Mukana kutsanangura maturusi makuru aripo pasi pemahara uye yakavhurwa sosi software marezinesi, zvakanyanyisa kunaka kupasa.
Chokwadi ndechekuti Pakati pemhedzisiro yekushanduka kwemamiriro ekunze, kukanganisa kwevanhu, uye hutachiona hutachiona, mumwe anofanirwa kugara aine urwu runyorwa padhuze.
Muchikamu chino chekutanga tiri kuzozvipira isu General-chinangwa kana chaicho-chinangwa chirongwa mitauro inogona kuuya inobatsira munguva dzenjodzi. Mune izvo zvinoramba tichakwira takananga.
1 Dambudziko rekugadzirisa. Nei zvichikosha kushandisa yemahara uye yakavhurwa sosi software
Dambudziko rekugadzirisa. Nei zvichikosha kushandisa yemahara uye yakavhurwa sosi software
Makore apfuura ini ndakave nemukana wekusangana nemunhu anotungamira mukunyora manhamba ehuwandu mushonga basa. Tiri kutaura nezve chimwe chezvipatara zvakakosha zveyunivhesiti muArgentina. Uyu munhu anodada akandiratidza kubata kwake kweExcel database mabasa. Pandakamubvunza kuti sei aisashandisa Access, akanditarisa senge ndanga ndaita kakanyanya kushata pabonde.
Zvinopera pasina kutaura izvozvo ruzivo rwakawanikwa nebasa rwanga rusina kukwana, kunonoka uye kusakwanisika kugovana zviri nyore.
Chokwadi ndechokuti munguva dzenjodzi, kumhanyisa kwekuwana, kugadzirisa nekuparadzira ruzivo Zvakakosha. Izvi zvinosanganisira
Zviri nyore kuzadza mafomu
Kugadzikana mukugadziriswa kwemashoko
Kugona kumiririra mhedzisiro nenzira inonzwisisika
Ini handisi kuzowira mukujeka kwekutsvaga kutsiva Microsoft Office neLibreOffice, haudi kuti ndizvione izvozvo. Zvandiri kutaura ndezvekuti ndivo vane basa nazvokuunganidza manhamba kunofanirwa kuve nekunzwisisa kwekutanga kweimwe yemitauro yemitauro ine mabasa ehuwandu. Semuenzaniso:
R iri mutauro uye nharaunda pKuti ishandiswe mukuverenga komputa uye graphing.
R inopa nzira dzakasiyana siyana dzekuverengas (mitsara uye isina mutsetse modelling, echinyakare manhamba bvunzo, nguva dzakateedzana ongororo, kupatsanura, mapoka uye graphing.
Python ndiyo Aloe Vera yemitauro yekuronga. UyeZviri nyore kwazvo kudzidza, inotsigirwa nemapuratifomu ese uye ine yakawanda maraibhurari kushanda nedata. Mamwe acho ndeaya:
pandas raibhurari yePython iyo inopa zvimiro zvedata uye ekumusoro-kuita dhata ongororo maturusi uye nyore kushandisa. Zita harinei nechekuita nemapere. Pandas ndicho chirevo cheData Kuongorora Raibhurari muPython.
Chitoro chemabhuku Iyo yakagadzirirwa kukurumidza uye nyore nyore kumonyororwa kwedata, kuverenga, kuunganidzwa, uye kuona. Uchishandisa Pandas zvinokwanisika kuunganidza iyo data kubva ku CSV kana TSV faira kana iyo SQL dhatabhesi uye kugadzira chinhu chePython chine mitsara nemakoramu anonzi data data. Iyo data furemu yakafanana chaizvo netafura mune Statistical software.
Pano isu tine una data visualization raibhurari iyo inopa yakakwira-chikamu chinongedzo kudhirowa inonakidza uye inodzidzisa maverengera mairafu.
Tinogona kushandisa Seaborn ku:
Sarudza hukama pakati pezvakawanda zvinowirirana (kuwirirana)
Tarisa uone akasiyana echikamu ehuwandu hwehuwandu
Ongorora univariate kana bivariate kugoverwa uye wozvienzanisa pakati peseti dzakasiyana dze data
Dhirowa mitsara yekumisikidza mitsara yezvakasiyana zvinoenderana.
Julia mutauro-wechirongwa-wechirongwa, kunyangwe eInowedzera kushandiswa nemasayendisiti uye mainjiniya kune ayo ekugona manejimendi kugona uye ane hushamwari, maficha-akapfuma nharaunda iyo inosanganisira: sarudzo zhinji dzekuona dhata uye kuronga, kubata nyore kwemadatha seti nematanho ekudyidzana munguva chaiyo, maraibhurari akasiyana siyana ekudzidza kwemuchina uye akafanana macomputer maficha.
Pamusoro pemaraibhurari akagadzirwa natively ekunyengedza dhata, mashandiro mashandiro, uye izvo zvakanangana neBigData, mutauro wechirongwa cheJulia, inotsigira zvakare kushandiswa kwePython, R, C / Fortran, C ++, uye Java mapakeji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Dambudziko rekugadzirisa. Iyo Open Source Inogona Kubatsira Sei
Mhoro!. Zvakaita kuti ndide kukorokotedza !. Nyika inoshamisa yandiri kusvika pakuziva zvishoma nezvishoma, Mahara Software! ...
Collabora Hofisi, LibreOffice nematurusi ayo ese anouya kuApple neIOS nekuda kweCollabora